UPitso uthi uzoqeqesha amaqembu afuna iCAF kuphela | News24
UPitso uthi uzoqeqesha amaqembu afuna iCAF kuphela
Cape Town – Umqeqeshi weMamelodi Sundowns, uPitso Mosimane, usephumele obala wathi uzimisele ngokuqeqesha amaqembu adlala kwi-Absa Premiership, anogqozi lokunqoba isicoco esikhulukazi sompetha ezwenikazi i-Afrika, iCAF Champions League.
Lo mqeqeshi obeqeqesha iBafana Bafana uqophe umlando kule sizini ngenkathi ethatha lesi sicoco seCAF neSundowns kule sizini.
Le nkulumo kaPitso ingabukeka njengebhinqa iKaizer Chiefs, nesidume kabi ngokungabi nandaba nemidlalo yase-Afrika.
OLUNYE UDABA: Ukunqoba kwe-Sundowns kuzofeza iphupho lango-2022 – Jordaan
“Ngakusho kusukela ngosuku lokuqala: ngize kwiSundowns ukuzowina iChampions League. Kungaba nzima kakhulu kumina ukuqeqesha iqembu elingakholelwa ekudlaleni ibhola lase-Afrika.
“Kumele ucabange ngokukwasemhlabeni jikelele – yebo, okukuqala ekhaya, kodwa bese kuba umhlaba jikelele. Awukwazi ukuthi, nginomkhiqizo – ake sithi yibhizinisi – eNingizimu Afrika, futhi iNingizimu Afrika iyawuthanda umkhiqizo, futhi muhle.
“Kodwa bese uthi angifuni ukuwudayisa eZimbabwe, angifuni ukuwudayisa eMorocco, noma e-Egypt, futhi angifuni nokuwudayisa eJapan,” uMosimane utshele iKickOff.